Hillery Chilton oo dhulka ku dhacday magaalada New York – Kismaayo24 News Agency
Hillery Chilton oo dhulka ku dhacday magaalada New York
by admin 12th September 2016 014
Muuqaal video ah ayaa laga daawaday iyadoo ay caawinayaan kalkaaliyaasheeda ayna awoodi weyday in ay keligeed ay fuusho gaarigeeda waxaana muuqaalka laga arkay iyadoo dhulka ku dhacaysa lagana soo qabanayo garbaha.
Dr.Lisa R. Bardack ayaa soo saartay qoraal loogu sheegayo kooxda u ololeynaysa Mrs Clinton inay baaritaan ku sameysay ayna ku ogaatay in xanuun sambabada ah uu jiro ayna u qortay daawooyin ayna waajib tahay in ay nasato dhowrka maalmood ee soo socoda.
‘Mrs Clinton waxaa hayay qufac ka dhashay aleerjik Jimcihii markii aan baaritaan ku sameeyay balse markii aan qiimeeyay waxaa sii kordhay qufacii waxaana uu noqday qaar-jeex, waxaan u qoray dawada caabuqa ka hortaga ama antibiotics waxaana aan ku talinayaa inay nasato oo dib loo eego qorshayaasheeda maalmaha soo socda.” Ayaa lagu yiri warbixin ay dhakhtaradu soo saartay.
“Dhacdadii saakana waxa ay ahayd in uu fuuqbax ku dhacay kuleyl xoogan oo jirey awgeed, hadda waan baaray waana la fuuq celiyay si wanaagsana waa ay u soo kabanaysaa.”ayay sii raacisay dhakhtarada.
Muqdisho oo wali kala xiran xili ay dadku u dabaal-dagayaan maalinta koowaad ee Ciida
Ciidamada Jubbaland oo gacanta ku dhigay….
Tifaftiraha K24 27th December 2016 27th December 2016